Dalxiiska Seychelles iyo Emirates waxay bilaabeen iskaashi suuqgeyn ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Dalxiiska Seychelles iyo Emirates waxay bilaabeen iskaashi suuqgeyn ah
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka kala duwan
Iskaashiga Seychelles iyo Emirates
Dalxiiska Seychelles wuxuu la bilaabay iskaashi istiraatiiji ah shirkadda duulimaadka Emirates, lammaane daacad ah iyo wada -shaqeeye, iyo diyaaradii ugu horreysay ee caalami ah oo ku laabata jasiiradda markii dib loo furay bishii Ogosto 2020.
Seychelles waxay soo dhoweysay in ka badan 15,000 oo dalxiisayaal ah oo ka yimid Imaaraadka ilaa iyo sanadkan.
Tallaabooyinka badbaadada iyo hab -maamuusyada tooska ah ayaa si habboon loogu talagalay in lagu fududeeyo safarka u dhexeeya meelaha la tegayo.
Emirates waxay todoba duulimaad ku shaqaysaa Seychelles oo ka timaadaa Dubai waana suuqa labaad ee hormuudka u ah jasiiradaha.
Iskaashiga waxaa ka mid noqon doona ololeyaal taxane ah oo ujeedadoodu tahay in la keeno Jasiiradaha Seychelles si ay ugu muuqato muuqaalka ugu sarreeya oo ah meesha ugu dambeysa ee waqtiga firaaqada ee dhammaan Golaha Iskaashiga Dawladaha Carabta ee Gacanka (GCC) iyada oo loo sii marayo nuxur la xiriira Seychelles oo ka dhex muuqan doona bulshada 'Emirates' aaladaha warbaahinta iyo sidoo kale suuqgeynta iimaylka iyo xayeysiisyada raadiyaha ee wadajirka ah.
Wadashaqeyntu waxay martida la socodsiin doontaa macluumaadka ku saabsan socdaalka jasiiradaha, oo soo dhoweeyay in ka badan 15,000 oo dalxiisayaal ah oo ka yimid UAE illaa iyo sannadkan oo, laga bilaabo Axadda, Ogosto 29, 2021, u taagan yahay suuqa labaad ee ugu horreeya xagga ilaha .
Intaas waxaa sii dheer, ololayaashu waxay xoojin doonaan xiriirka ganacsi ee socdaalka waxayna kor u qaadi doonaan aqoonta wax soo saarka iyada oo loo marayo tababbarka onlaynka ah iyo aqoon isweydaarsiyo iyo sidoo kale safarada barashada, oo diiradda lagu saarayo aagagga xuduudahoodu hadda u furmeen safarka.
Ilaalinta nabadgelyada wadnaha u safray Seychelles, iskaashigu wuxuu kaloo iftiimin doonaa safarka Dubai ilaa qaranka jasiiradda, oo ay ku jiraan tafaasiil muhiim ah sida tallaabooyinka badbaadada iyo borotokoollada tooska ah ee si habboon loogu talagalay in lagu fududeeyo safarka. Intaa waxaa dheer, martidu waxay awoodi doonaan Ogow waxa Jasiiradaha Seychelles ku kaydsan yihiin iyaga ka hor intaanay xitaa soo degin xeebaheeda bacaadka ah.
Iyadoo ka hadlaysa wada -shaqaynta, Xog -hayaha Guud ee Dalxiiska, Marwo Sherin Francis, ayaa tidhi, “Wada -shaqaynta Emirates waa mid koboc iyo xoog ku korodhay, waanan ku faraxsanahay taageerada ay siiyeen halka loo socdo iyo Dalxiiska Seychelles xagga sanadka. Iskaashiga sannadkan ma aha mid ka duwan. Si kastaba ha ahaatee, wakhti ay warshadeenu si tartiib tartiib ah u soo kabanayso oo ay dhisidda kalsoonida safarka aad muhiim u tahay, iskaashiga sida kan ayaa leh macne iyo qeexitaan cusub. Shaqadan wada shaqayneed, waxay u noqon doontaa guul labada shirkadood ee duulimaadka iyo meesha loo socdoba. ”
Iyada oo ay Emirates toddobaadkii duulimaadyo ka samaysato Seychelles oo ka timaadda Dubai, muwaadiniinta UAE iyo dadka degganba waxay hadda qorshayn karaan inay ka baxsadaan dhulka biyaha turquoise, xeebaha pear iyo buuraha emerald, iyagoo ka dooranaya mid ka mid ah hoteelada raaxada badan ama guryaha martida soo jiidashada leh joogitaankooda .
Gelitaanka Seychelles waxay u baahan tahay caddeyn tijaabo COVID-19 oo taban, oo lagu qabtay 72 saacadood gudahood laga bilaabo taariikhda safarka iyo oggolaanshaha barnaamijka Ruqsadda Socdaalka Caafimaadka. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan u safrida jannada jasiiradda waxaa laga heli karaa 'seychelles.advisory.travel.'
September 25, 2021 at 05: 24
Waan ognahay, Emirates Airline waxay ballaarisay heshiiska suuqgeynta caalamiga ah ee Seychelles. Shuruudaha tijaabinta COVID-19, u safrida iyo ka imaanshaha Dubai, ammaan ahaanshaha, iyo ikhtiyaarada tigidhkayaga dabacsan.